ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: September 2008
New signing Mineiro has been handed the number 27 shirt after completing his move yesterday.
The Brazilian completes the squad list, which also sees numbers for youngsters Miroslav Stoch and Michael Mancienne, both on the bench last night at Portsmouth.
30. Rhys Taylor
43. Miroslav Stoch
Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:16 PM No comments: Links to this post
တင်လိုက်မယ် ၊ တင်လိုက်မယ် နဲ့ မတင်ဖြစ်တာ ၄ ရက်လောက်ရှိနေပါပြီ။ သြဂုတ်လ ကုန်လို့ စက်တင်ဘာတောင် ထပ်ကုန်တော့မယ်။ မေ့မေ့ နေတာနဲ့။ အခုမှ တင်ဖြစ်တော့တယ်။ တခြားပွဲတွေကလည်း ကောင်းနေတယ် မဟုတ်လား။ ချဲလ်ဆီး ချစ်သူများအတွက် ဖန်တူချင်း စေတနာလေးပါ။ အော်....တခြားဖန်တွေ ဒေါင်းလုပ်မချရဘူးနော်။ :D Just Kidding :P ။ သြဂုတ်လအတွက် အကောင်းဆုံး ဂိုး ( ၁၀ ) ဂိုးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:32 AM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:59 PM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:17 AM No comments: Links to this post
First Goal By Jose Bosingwa
Second Goal By Anelka
Chelsea - Winner - Forever
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:21 PM No comments: Links to this post
Luiz Felipe Scolari has ruled Joe Cole out of Saturday's game at Stoke withaminor injury.
The winger will not travel to the Potteries, remaining behind at Cobham for treatment along with team-mates Ricardo Carvalho and Deco.
'Deco works with the medical staff and Carvalho the same, and today Joe Cole felt again his injury, so he will not go tomorrow. 21 days is the time for Deco and Carvalho. Joe Cole will be two or three days,' Scolari said.
For the home side, manager Tony Pulis will definitely be without defender Danny Pugh who is suspended and injured Andrew Davies, while forwards Ricardo Fuller and Mamady Sidibe are major doubts. They both picked up knocks against Reading in League Cup action during the week. Ibrahima Sonko is alsoapotential absentee after injury against Liverpool last week.
The Potters will welcome back Amdy Faye who returns from suspension forared card picked up against Middlesbrough last month.
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:11 AM No comments: Links to this post
ဒီအသင်းရဲ့ နောက်ဆုံး ငါးပွဲမှာ လီဗာပူးလ်ကို သရေခံကစားနိင်ခဲ့တဲ့အပြင် ကျန်သည့်ပွဲတွေမှာလည်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ နေရာမှာ ဂိုးပြက်မဟုတ်ဘဲ သူကတောင် ချေပဂိုးပြန်သွင်းနိင်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသင်းငယ်က အသင်းငယ် ဖြစ်တာရယ် ၊ နည်းပြကလည်း အသင်းကြီးနဲ့တွေ့ရင် တိုက်စစ်မှုးတောင် မထည့်ဘဲ ဖင်ပိတ်ကန်တက်တာ လီဗာပူးလ်ဆီကနေတောင် သရေတမှတ်တောင် ရအောင်ယူနိင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ လူအင်အား ၊ အရည်အချင်းနဲ့တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ယှဉ်နိင်ဖို့ မလွယ်တာကြောင့် ဖင်ပိတ်ကန်နိင်အောင်ပဲ သူတို့ကြိုးစားမှာပါ။
မန်ယူနဲ့စပါးကို ၁း၁ ဂိုးဆီ သရေကျခဲ့တာက လွဲလို့ ချဲလ်ဆီးဟာ ပွဲတိုင်း ၊ ဖလားတိုင်းကို ခြေပြက် ၊ ဂိုးပြက်နဲ့ အနိင်ရအောင် ကစားနေနိင်ခဲ့ပါတယ်။ ကွင်းလယ်အဓိကအဖျက် အက်ဆီယန် မပါနိင်ခဲ့တာတောင် စကိုလာရီဟာ ဘလက်တီကို အဖျက်တက်ဆော့ခိုင်းရဲတဲ့အထိ စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး ၊ နိင်ပွဲတွေလည်း ရရှိထားပါတယ်။ Stoke City အနေနဲ့ ချဲလ်ဆီးကို ပိတ်ဆို့ဖို့ဆိုတာ မြန်မာအသင်းကို ကမ္ဘာဖလား ကန်ခိုင်းတာကမှ လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ဂိုးမြူးနေတဲ့ တိုက်စစ်မှုးတွေ ၊ အလယ်တန်းတွေဟာ သူတို့ဘယ်လောက် လုပ်ဆောင်နိင်တယ်ဆိုတာကို ပြသချင်နေကြတာပါ။ စကိုလာရီ အနေနဲ့ကလည်း သူရဲ့ပထမဆုံး ရာသီအစမှာ ဘယ်ပွဲကိုမှ အမှားခံနိင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အပြာရောင်ခြင်္သေ့တွေပီပီ အားမာန်အပြည့်နဲ့ သားကောင်ကို ဖမ်းသလို ဖမ်းမှာပါ။ စတုတ်တို့ ဂိုးပြက်ဖို့သာ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
ဒီပွဲအတွက် ကျွန်တော့်ခန့်မှန်းကတော့ ၀း၂ ပါပဲ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:41 PM No comments: Links to this post
မဒေါင်းပဲ နဲ့ ကြည့်လို့ အဆင်ပြေအောင် တင်ထားပေးပါတယ် .... :)
Posted by စိုးထက် - Soe Htet ! at 7:17 PM No comments: Links to this post
Labels: 2008/09 Carling Cup HighLight
Chelsea have confirmed the signing of Mineiro onadeal that will see the Brazilian stay at Stamford Bridge until the end of the season.
The defensive midfield player was released by Hertha Berlin at the end of last season and had been withoutaclub since.
The 33-year-old becomes the third Brazilian in compatriot Luiz Felipe Scolari's squad, after defenders Alex and Juliano Belletti.
Mineiro has won 24 caps for Brazil and wasamember of the 2006 World Cup squad, as well as appearing against England at Wembley in 2007.
Scolari told the club's official website: "He isaplayer that I need because I lost Michael Essien for six months. I have one midfielder like him, [John Obi] Mikel.
"So this week he will not play but maybe after 15 days to two weeks, he is ready to play normal games. He needs to play some games in the reserve team, and for me it is very good because I have one more player in this position. If not I have to put in Belletti or [Paulo] Ferreira, or [Michael] Ballack, and they are not for this position.
"I say to fans of Chelsea, if they remember [Claude] Makelele, Mineiro is the same. Good positionally,avery good marker. He isaman that works for the other players and he is alsoagood man outside of the pitch."
Mineiro spent 18 months with Berlin, making 36 Bundesliga appearances and scoring twice, after having moved to Europe from Brazil, where he had spells with Ponte Preta, Sao Paulo and Sao Caetano.
Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:14 PM No comments: Links to this post
First Goal By F.Lampard
Second Goal By F.Malouda
Third Goal By F.Lampard
Fourth Goal By Kalou
Enjoy It !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:23 AM No comments: Links to this post
စကိုလာရီက ကျွန်တော်တို့ ချဲလ်ဆီးချစ်သူတွေ ပြောတာ ကြားသွားတယ်ထင်တယ်။း) အရံတွေကို ထုတ်သုံးပေးသွားတယ်။ သူလည်း နည်းပြလုပ်နေတာ ဒီလောက်မှ မဒက်ရင်လည်း လစ်မှာပဲ။ အခုတော့ တော်သေးတယ်။ ဂွတ်ဗျာ။ ဟိုက်လိုက်ကတော့ လာမယ်။ ကျွန်တော်လည်း စောင့်နေတုန်း။း)
this isaFrank Lampard
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:29 AM No comments: Links to this post
Chelsea အတွက် အေးဆေးပဲလား ပို့စ်မောက်အတွက် အခဲမကြေတဲ့ ပွဲလားဆိုတာ ကံဆိုးကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ မနက်ဖြန်မှာ ကန်မဲ့ ကာလင်းဖလားပွဲဟာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ပြည့်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။
ကာဗယ်လ်ဟို နဲ့ ဒေကို နာသွားခြင်းဟာ ချဲလ်ဆီးအတွက် တပြိုက်နက် ထိုးနှက်ချက်တခုပါပဲ။ အဲလက်စ်ကတော့ တိုက်စစ်ပိုင်း အားသာတဲ့ နောက်ခံလူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ ကစ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့ နိင်ပွဲတွေ ရရှိထားခဲ့ပါသေးတယ်။ ဘောလက်နဲ့ ဒရော့ဘာ ပြန်ပါလာနိင်တာကိုပဲ ချဲလ်ဆီးအတွက် ခံသာပါသေးတယ်။ အခုလို လူနာသွားတဲ့ အချိန်မှာ အငှားစာချုပ်ချုပ်နဲ့ ခေါ်ချုပ်ထားတဲ့ Piam ကို စကိုလာရီအနေနဲ့ ထည့်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒီကစားသမားလေးဟာ လူငယ်ပေမယ့် ခြေစွမ်းခြေစရှိပြီးသားပါ။ လမ်းပတ် ၊ ဘောလက် တို့နဲ့ တွဲပြီး ဆော့ပေးသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Santos ပါ။ သူ့ကိုလည်း ချဲလ်ဆီးအနေနဲ့ နိင်နေရင် ဖြစ်ဖြစ် ထည့်သုံးသင့်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
ပွဲအစမှာ ၄ ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်မောက်အနေနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရင်တောင် အရင်လို ဂိုးပြက်မှာ မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးအတွက် အနည်းငယ် အခက်အခဲ ဖြစ်စေမယ့် ပွဲဆိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
သေချာမယ်ဆိုရင် ဒီအဖြေဟာ ၁း၃ ပါပဲ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:17 PM No comments: Links to this post
Chelsea are close to signing free agent Carlos Mineiro, with the West London side seeing the Brazilian International as an ideal replacement for long-term injury Michael Essien.
33-year-old Mineiro, who isafree agent after seeing his contract out at Bundesliga team Hertha Berlin had been heavily tipped to join Chelsea’s Premier League rivals Arsenal, but Gunners boss Arsene Wenger decided against offering the defensive-midfielderacontract at the Emirates Stadium after taking Mineiro onashort trial.
Championship side Birmingham City had also shown an interest in Mineiro, but it now appears that the midfielder is heading for Stamford Bridge. Chelsea had reportedly also consideredamove for another free agent, Ghana captain Stephen Appiah, but instead have chosen to take Brazilian Mineiro to the West London club.
Chelsea’s manager Luiz Felipe Scolari isabig admirer of Mineiro, from his time in charge of the Brazil team, with his assistant Flavio Mutosa confirming that the midfielder is on the verge ofamove to Chelsea.
“We have practically completed the recruitment of Mineiro,” Murtosa told Radio Bandeirantes.
“He was available, out of contract with the German club, and at this time we had the chance to hire him and satisfy our need [foranew midfielder].”
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:26 PM No comments: Links to this post
ဟဲ့...ပလုတ်တုတ်.......ဖြည်းဖြည်းသက်သာ ဖျက်ပါ :)
ကုလားမီးနင်းမဟုတ်ပါ ( ဘောလုံးကန်နေခြင်းဖြစ်ပါသည် ) :P
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:43 PM No comments: Links to this post
First Goal By P.J
Second Goal By Kalou
HQ ( HightLight )
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:54 PM No comments: Links to this post
မနက်ဖြန်မှာ ကန်မဲ့ ချဲလ်ဆီးးမန်ယူပွဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ စိတ်အ၀င်စားဆုံး ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာဦးမှာပါ။ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ သက်တမ်းကြာရှည်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဖာဂူဆန်နဲ့ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ပြောင်းလာတဲ့ နည်းပြကြီး စကိုလာရီတို့ရဲ့ အားပြိုင်မှု့ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
မတူညီတဲ့ ရှု့ထောင့်ကနေ ပြိုင်ဘက်တွေကို အသာစီးရထားကြတဲ့ ဒီနည်းပြ ၂ ယောက်စလုံးမှာ အနေအထားရ ချဲလ်ဆီးနည်းပြ စကိုလာရီကတော့ အသာရထားပါတယ်။ လူစုံတက်စုံလည်း ဖြစ်ပြန် ၊ အိမ်ကွင်းလည်း ဖြစ်နေသည့် အပြင် မန်ယူမှာ အဓိက ဗဟိုခံစစ်မှုး ဗီဒစ်ဟာ ကြမ်းတမ်းစွာ ဖျက်ထုတ်မှုကြောင့် အနီကတ်ထိခံရပြီး ပွဲပယ်ထားတာကြောင့် မန်ယူအနေနဲ့ ဒါဟာ အဓိကထိုးနှက်ချက်ပါ။ မန်ယူအတွက် ရိုနယ်လ်ဒို ပြန်ပါလာနိင်ပေမယ့် ကောင်းစွာကစားနိင်ပ့ါမလားဆိုတာ စဉ်းစားရပါမယ်။ ဖာဂီအနေနဲ့ကလည်း ဒဏ်ရာက ပြန်ကောင်းခါစ သူ့ကစားသမားကို ကာရစ်လို အဖြစ်မျိုးနောက်ထပ် အဖြစ်ခံနိင်ပါ့မလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။ မန်ယူကတော့ လူမစုံပေမယ့် အသင်းကြီးပီသစွာ ကစားနိင်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိ နောက်ဆုံး ၅ ပွဲမှာ ချဲလ်ဆီးက ၄ ပွဲနိင် ၊ ၁ ပွဲ သရေ ကျထားပြီး ၊ မန်ယူက ၃ ပွဲရှုံး ၂ ပွဲ သရေ ကျထားပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးမှာ အက်ဆီယန် နာနေချိန်မှာ ဘောလက်ပြန်ကောင်းလာတာရယ် ၊ ဒဏ်ရာကြောင့် နားနေတဲ့ ဒရော့ဘာ ပြန်ပါလာနိင်တာဟာ မန်ယူအတွက် ထိုးနှက်ချက် တရပ်ပါ။ နောက်ပြီး ချဲလ်ဆီးရဲ့ အိမ်ကွင်းစံချိန်ကို ချိုးနိင်မဲ့ အသင်းဆိုတာ အခုထိ မပေါ်သေးပါဘူး။
လူစုံတက်စုံနဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့ အိမ်ကွင်းမှာ ၃ မှတ်ကို ရအောင် ယူနိင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါဟာ မန်ယူရဲ့ ၄ ပွဲမြောက်ရှုံးပွဲ ဖြစ်ပြီး ချဲလ်ဆီးနဲ့ ၉ မှတ်ပြက်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာ လူစာရင်းထုတ်ပုံလေးကို မနက်ဖြန်မှာ စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။ ကျွန်တော်အထင်ကတော့ ဒါဟာ
၂းဝ ပါပဲ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:47 AM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:06 PM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:17 PM No comments: Links to this post
မြားလေး နှိပ်၍ MP3 နားဆင်ပါ ခင်ဗျာ ... :)
Posted by စိုးထက် - Soe Htet ! at 4:24 PM No comments: Links to this post
We're Chelsea till we die
we're sure we are
Chelsea are magic,
Man Utd are tragic.
Arsenal are crazy
Man Utd Druel
They should go back to
Posted by ဆိုးသွမ်း at 10:36 PM No comments: Links to this post
မန်စီးတီး နဲ့ ပွဲ မှာ ဒိုင်လူကြီး မာ့ခ် ဟာလ်ဆေး ရဲ့ ရုတ်တရက် ဆုံးဖြတ်ချက် ကြောင့် အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်း နှင့် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ခေါင်းဆောင် ဂျွန်တယ်ရီ ဟာ အနီ ကဒ်ဖြင့် ပွဲမှ ချက်ချင်း ထုတ်ပယ် ခံ လိုက် ရသလို ၃ ပွဲ ပယ် ပြစ်ဒါဏ် ပါ ခံ ခဲ့ ရပါတယ်။ ဆက်လက် အယူခံ ဝင်ခဲ့ရာမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အတွက် တနင်္ဂနွေ နေ့ ၌ အိမ်ကွင်းမှာ တွေ့ဆုံမယ် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ပွဲ မှာ ပါဝင် လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Chelsea captain John Terry will play against Manchester United on Sunday after winning his appeal againstared card.
Referee Mark Halsey sent off the England defender for serious foul play against Manchester City on Saturday.
Terry hauled down City striker Jo as he raced towards goal, using his arm to performapseudo-rugby tackle.
"At an Independent Regulatory Commission hearing today,aclaim for wrongful dismissal from Chelsea's John Terry was upheld," said an FA statement.
"Asaresult of today's hearing, Terry's three match suspension has been withdrawn."
Halsey's designation of the offence as serious foul play, rather thanaprofessional foul, indicated he did not believe Terry to be the last defender.
Chelsea argued successfully that the foul warranted no card as the FA are not empowered to downgrade cards from red to yellow, merely to strike them off altogether.
The news comes asamajor boost to the Premier League leaders, who can count on Terry for the visit of champions United to Stamford Bridge on Sunday.
United are withoutakey defender in Nemanja Vidic, who was sent off forasecond bookable offence in the 2-1 defeat at Liverpool on Saturday.
Midfielder Michael Carrick is also out after it was revealed he hasabroken foot and could miss up to six weeks.
Chelsea's haul of 10 points from their first four games gives themalead of six points over United, who haveagame in hand.
Posted by စိုးထက် - Soe Htet ! at 6:38 PM No comments: Links to this post
First Goal By Lampard
Second Goal By Joe Cole
Third Goal By Molouda
Fourth Goal By Anelka
Hight Quality Hight-Light ( Full Mach )
File Size - 99.Mb
Download By Zshare
တင်ဖို့ စောင့်နေရလို့ အနည်းငယ် နောက်ကျသွားတယ်ဗျာ။ တက်နိင်သလောက်တော့ အကောင်းဆုံး အချိန်မှီတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မကြည့်လိုက်ရတဲ့ သူတွေအတွက် ချဲလ်ဆီးချစ်သူချင်း ကိုယ်ချင်းစာလို့ပါ။ ကဲ....သူငယ်ချင်းတို့ ၊ အစ်ကိုတို့ အမတို့ ညီငယ်တို့ရေ ဟိုက်လိုက်လေးကို ဒေါင်းလုပ်ချရင်း အခေါက်ခေါက် အခါခါ ပြန်ကြည့်ရင်း အောင်ပွဲခံလိုက်ပါဦးဗျာ။
ပျော်ရွှင်ပါစေ......။ အော်...ညီလေး ။ မမိုက်နဲ့ ချဲလ်ဆီးပဲ အားပေး။ ချဲလ်ဆီးပဲ အားပေး။ :P
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:01 AM 1 comment: Links to this post
အိမ်ရှင်ပီသစွာနဲ့ပဲ ချဲလ်ဆီးဟာ ပြင်သစ်ကလပ် ဘိုးဒေါ့ကို လူအသာ ၊ ခြေအသာနဲ့ ကစားသွားနိင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ စကိုလာရီဟာ လူမပြောင်းဘဲ ပွဲထွက်နေကြ ပုံစံအတိုင်း ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့တန်းမှာ အနယ်လ်ကာကို အထောင်ထားပြီး ဂျိုလ်ကိုး နဲ့ မာလူဒါကို ၀န်းရံကာ မီခေးလ်အဖျက်နဲ့ ဆော့ကစားသွားပါတယ်။ ဒီပွဲအတွက် နောက်တန်း ၊ အလယ်တန်း ၊ ရှေ့တန်းရော အမှားမရှိခဲ့ပါဘူး။
တိုက်စစ်မှုး တာဝန်ယူနေရတဲ့ အနယ်လ်ကာဟာလည်း ဒီပွဲအတွက် တာဝန်ကျေစွာ လိုက်လံကစားပေးပါတယ်။ လမ်းပတ်ရဲ့ အပိုင်ဂိုး ၊ အနယ်လ်ကာရဲ့ တိုင်ထိဂိုး ၊ တယ်ရီရဲ့ ကပ်ထွက်သွားသည့်ဂိုး တွေကိုပဲ ထည့်တွက်မယ်ဆိုရင် ချဲလ်ဆီးဟာ ( ၇းဝ ) နဲ့တင်ကို အနိင်ရမှာပါ။
ဘိုးဒေါ့ရဲ့ တိုက်စစ်ဟာ ပြောပနိင်လောက်အောင် ထိုးဖောက်နိင်ခြင်း မရှိတာကြောင့် အက်ရ်ှလေးကိုးနဲ့ ဘောင်ဆင်ဝါတို့ဟာ တိုက်စစ်အကူအဖြစ် တောင်ပံတွေကနေ ရှေ့အထိ လိုက်ကူပေးနိင်ခဲ့ပါတယ်။ ဗဟိုခံစစ် နေရာမှာ တယ်ရီနဲ့ကာဗယ်လ်ဟိုကလည်း ထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်နိင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲအတွက် Man Of The Match နဲ့ထိုက်တန်သူကတော့ Frank Lampard ပဲ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း ဂိုးသွင်းယူမှု ၊ ဂိုးရအောင် ဖန်တီးပေးနိင်မှုတွေနဲ့ ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့နိင်ပါတယ်။ ဒီပွဲအတွက် ဒရော့ဘာကို မန်ယူပွဲအတွက် လူချိုခဲ့ပေမယ့် ၊ ၀မ်းသာစရာကတော့ ဘောလက် ပြန်ပါလာနိင်ခြင်းပါ။ ဒုတိယပိုင်းပွဲစပြီး အကြာ ဘောလက်ကို ဒေကိုနဲ့ ၊ ဂျိုလ်ကိုးကို ဘလက်တီနဲ့ ၊ ပွဲပြီးခါနီးမှာ မာလူဒါကို အကာလူးနဲ့ လဲခဲ့တဲ့ စကိုလာရီနည်းစနစ်ဟာ မှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ အနိင်ဂိုးထိန်းရန် နောက်တန်းတစ်ယောက်နဲ့ ရှေ့တန်းကို မပျက်အောင် မာလူဒါကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ဟဲဟဲ။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ မိုက်ကယ်ဘောလက်ပါပဲ။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ကွင်းလယ်မှာ သူရဲ့ဖျက်ထုတ် ၊ ခင်းကျင်းမှု့တွေဟာ အက်ဆီယန်နာနေတဲ့ ကာလအတွင်းတော့ အားတက်စရာပါပဲ။ မီခေးလ်က ငယ်သည့်အပြင် အတွေ့အကြုံလိုပါသေးတယ်။ တခါတရံ တဇွတ်ထိုးလုပ်တက်တဲ့ အကျင့်ကလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒီနေ့အတွက် ချဲလ်ဆီးအသင်သားအားလုံး ၊ နည်းပြ နဲ့ အားပေးသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အနိင်ရလိုက်တာကြောင့် ချဲလ်ဆီးတွေ ပျော်မဆုံး မော်မဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ ဘယ်လိုပွဲပဲ နိင်နိင် ချဲလ်ဆီးနိင်ရင် ကျေနပ်တယ်ဗျာ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:18 AM No comments: Links to this post